नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका बिमारी निको हुदै ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका बिमारी निको हुदै !
नेपालमा कोरोना सं`क्रमण पुष्टि भएका नौ जनामध्ये आठ जनाको स्वास्थ्य अवस्था ‘सुधारो`न्मुख’ हुँदै गएको छ । एक जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।सं`क्रमित उपचाररत अस्पतालका चिकित्सकले कोराना संक्र`मण भएकाहरू निको हुने क्रममा रहेकाले आत्ति`नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । चिकि`त्सकले पर्याप्त सतर्कता अपनाउन भने सबैमा आग्रह गरेका छन् । प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसं`ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार आइ`सोलेसन वार्डमा उपचाररत आठै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । संक्र`मितमध्ये दुई जनाको शुक्रराज ट्रपि`कल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, दुई जनाको धौलागिरी अस्पताल र चार जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका प्रवक्ता डा. जगदीश जोशीले संक्र`मितहरूको स्वास्थ्य अवस्था ‘ख`तरा`मुक्त’ रहेको बताए । उनले भने, ‘संक्र`मित चार जनामध्ये एक जनामा रुघाखोकी र ज्वरो आएको थियो । बाँकी तीन जनामा कुनै लक्षण देखिएको थिएन । सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।’
गत १० माघमा पहिलोपटक चीनको वुहान`बाट फर्किएका ३२ वर्षीय युवकलाई कोरोना सं`क्रमण पुष्टि भएको थियो । हाल उनी उपचारपछि निको भएर घर फर्किस`केका छन् । १७ माघमा पुनः परीक्षण गर्दा उनको रिपोर्ट नेगे`टिभ आएको थियो ।१० चैतमा दोस्रो संक्र`मित पुष्टि भएको थियो । दोस्रो संक्र`मित ४ चैतमा कतार एयरको क्यूआर ६५२ को फ्लाइटबाट नेपाल भित्रिएकी थिइन् । काठमाडौंकी १९ वर्षीया ती युवती हाल शुक्र`राज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत छिन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रा`लयले जनाएको छ ।
१२ चैतमा तेस्रो संक्र`मित भेटिएका थिए । उनी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट आएका धा`दिङका ३२ वर्षीय नेपाली पुरुष हुन् । ६ चैतमा नेपाल फर्किएका उनी १० चैतमा शुक्र`राज ट्रपि`कल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्न भएका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य बन्दै गएको छ । उनी एयर अरबियाको फ्लाइट नम्बर जी ९५३७ बाट यूएईको सार`जहाँ विमानस्थलबाट नेपाल आएका थिए ।सं`युक्त अरब इमिरेट्स दुबईबाट नेपाल फर्किएका धनगढीका ३४ वर्षीय पुरुष चौथो संक्र`मित हुन् । १४ चैतमा संक्र`मणको पुष्टि भएका उनको उपचार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ । बागलुङकी १९ वर्षीया युवती पाँचौं संक्र`मित हुन् । १५ चैतमा संक्र`मणको पुष्टि भएकी उनी कतार एयरको क्यूआर ६५२ को फ्ला`इटबाट नेपाल आएकी थिइन् । उनको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
४ चैतमा कतार एयरबाट नेपाल आएकी बागलुङकी महिलामा संक्र`मण पुष्टि भएपछि संक्र`मितको संख्या ६ पुगेको थियो । २० चैतमा संक्रम`ण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रा`लयले जानकारी गराएको थियो । हाल ती महिलाको धौलागिरी अस्पतालमा उपचार जारी रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।गत २० चैतमा थप तीन जनामा कोरोना संक्र`मण पुष्टि भएको थियो । संक्र`मितमध्ये एक जनामा स्थानीय संक्र`मण देखिएको थियो । चौथो संक्र`मितको नाताले भाउजू पर्ने ३४ वर्षीया महिलालाई संक्र`मण पुष्टि भएको हो । भारतको उत्तरा`खण्डबाट नेपाल आएका कञ्चन`पुरका ४१ वर्षीय पुरुषमा सं`क्रमण देखिएको हो । यस्तै, संक्र`मण देखिएकामध्ये कैलालीका २१ वर्षीय पुरुष मुम्बईबाट नेपाल फर्किएका थिए । ती तीन जनाको उपचार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ ।